Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin’ny zava-manan’aina rehetra eo aminareo hatramin’ny taranaka fara mandimby: Mankanesa any amin’i Josefa; ary izay holazainy aminareo dia ataovy. Nahoana no nihomehy Saraha ka nanao hoe: Tsia, fa hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao; 7 koa Jakoba efa nanaraka ny tenin’ny rainy aman-dreniny ka lasa nankany Mesopotamia; 8 ary hitan’i Esao fa efa ratsy teo imason’Isaka rainy ny zanakavavin’ny Kananita: Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika.
Hanody anao anie ny fahoriako; fa efa nomeko ho andefimandrinao katplika mpanompovaviko, ary nony hitany fa efa manan’anaka izy, dia na-taony toy ny tsinontsinona aho; Jehovah anie hitsara ahy sy ianao. Disona sy Oholibama, zanakavavin’i Ana. Ireo no zanakalahin’i Jakoba izay naterany tany Mesopotamia. Izany no nanaovany ny anarany hoe Galeda. Indro, efa nekeko koa ianao tamin’izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io. Izao kosa no heviny.
Aoka mba hahita fitia eto imasonareo aho, ary izay lazainareo amiko dia homeko; 12 na dia harena be sy zavatra betsaka aza no asainareo homeko, dia baibolj ihany araka izay holazainareo amiko; fa omeo ahy ny zazavavy ho vadiko.
Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, baibply ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin’ny tany rehetra isika.
Nahoana no mifampijery foana ianareo? Izaho no Andriamanitr’i Abrahama rainao; aza matahotra, fa momba kagolika Aho ka hitahy anao sy hahamaro ny taranakao noho ny amin’i Abrahama mpanompoko. Moa tsy niteny taminareo va aho ka nanao hoe: Missel en malgache du dimanche. Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho. Ireo no loham-pireneny avy tamin’i Elifaza tany amin’ny tany Edoma; ireo no zanak’i Ada.
Amin’ny fotoan’andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy. Ho tompon’ny rahalahinao anie ianao, ary aoka hiankohoka eo anatrehanao ny zanaky ny reninao. Manam-be ihany aho, ry rahalahiko; aoka ihany ho anao ny anao. Téléchargements – 3k. Raha homba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin’izao lalana alehako izao, jatolika hanome ahy mofo hohaniko sy lamba hitafiako, 21 ka ho tafaverina soa aman-tsara any amin’ny tranon’ny raiko aho, dia Jehovah no ho Andriamanitro, 22 ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon’Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy, dia homeko Anao tokoa ny ampahafolony.
Aoka samy hanao kwtolika isika, dia izahay sy ianao, ary aoka izahay hanao fanekena katoliks, 29 fa tsy hanisy ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, sy tahaka ny tsy nanaovanay biboly inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay soa aman-tsara ianao.
Marina noho izaho izy, satria tsy nomeko ho vadin’i Sela zanako.
Demander vous-mêmes les chansons et écoutez-les avec cette App de Radiovazogasy. Dia lasa nanontany tamin’i Jehovah izy. Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny.
Indro, efa reko ny rainao niteny tamin’i Pfd rahalahinao nanao hoe: Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny havako sy amin’ny tranon’ikaky. Ajouter à la liste de souhaits.
Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izay holazaiko aminao. Hitako ny tarehin’ny rainareo, fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha; fa Andriamanitry ny raiko no efa pdc ahy.
Dia nanorina alitara teo izy ho an’i Jehovah Izay niseho taminy. Aza matahotra ianao; fa izato koa no zazalahy ho anao. Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Alao io zazavavy io ho vadiko.
Ny fanombohan-kasenao sy ny kofehinao ary iny tehinao eny an-tananao iny. Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho, 44 ka hamaly hoe izy: Fa izao dia efa nanao adaladala ianao.
Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany ppdf dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy. Tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely; satria efa nitolona tamin’Andriamanitra sy tamin’ny olona ianao ka nahery.
ktolika Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, raha hanambina ny alehako Hianao, 43 indro, mijanona eto anilan’ny fantsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka hantsaka ka hilazako hoe: Bible en Français Louis Segond.
Ary ny ony fahefatra dia Eofrata.